XASAASI: Ronaldo Oo Qarka U Saaran Kusoo Laabashada Old Trafford Kaddib Markii Ay City Ku Gacanseyrtay Saxiixiisa – Garsoore Sports
XASAASI: Ronaldo Oo…
Superstar-ka reer Portugal ayaa markii hore loosoo bandhigay kooxda heysata horyaalka Premier League ee Manchester City balse haatan wuxuu u muuqdaa mid qarka u saaran kusoo laabashada kooxdiisii Hore ee Manchester United
Kooxda Manchester United ayaa hadda wadahadalo horumar leh kula jirta weeraryahankoodii hore ee Cristiano Ronaldo kaasoo ay tahay in lagu soo iibsado 28 milyan oo yuuro kaddib markii Manchester City ay soo afjartay xiisihii ay u qabtay xiddiga shanta jeer ku guuleystay Ballon d’Or-ka.
Ilo wareedyo kasoo baxaya kooxda Man City ayaa sheegaya in wakiilka Ronaldo ee Jorge Mendes uu usoo bandhigay saxiixa kiliyentigiisa kaddib markii ay waayeen bartilmaameedkooda ugu sarreeyay ee Harry Kane kaasoo go’aansaday inuu sii joogo kooxdiisa Tottenham.
Si kastaba ha ahaatee, City ayaa go’aansatay inay gebi-ahaanba isaga harto baacsigii ay ugu jirtay 36 jirkan, iyadoo Old Trafford hadda loo tixgeliyey inuu yahay halkiisa xigta ee macquulka ah.
Maxaa laga arrinta suuqa ee Ronaldo?
Shir jaraa’id oo uu qabtay Jimcihii, Pep Guardiola ayaa soo jeediyay in kooxda Man City ay sidooda ahaan doonto inkastoo ay ku guuldareysteen inay bedelaan Sergio Aguero oo kaga biiray Barcelona dhammaadkii xilli ciyaareedkii hore.
“Mawqifka hadda kani waa dareenkayga inaan aad ugu faraxsanahay kooxda aan haysto waxaanan dhihi doonaa si la mid ah” ayuu yiri Guardiola.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay in badanna waan ku qanacsanahay kooxda aan heysto. Waxaan haysanaa kooxdii hore marka laga reebo hal ciyaaryahan oo naga tagay waa Sergio Aguero waxaana helnay Jack [Grealish].”
Tababaraha United Ole Gunnar Solskjaer, ayaa dhanka kale diiday inuu meesha ka saaro heshiiska.
“Ma doonayo inaan qiyaaso wax badan. Cristiano waa halyeeyga kooxdaan, waa ciyaaryahanka ugu weyn abid, ”ayuu yiri Solskjaer.
“Waa bini’aadam aad u weyn sidaa darteed aan aragno waxa ku dhacaya isaga; qof kasta oo la ciyaaray isaga wuxuu u hayaa qalbi jilcan.”
Tababaraha Juventus Max Allegri ayaa shirkiisa jaraa’id ku xaqiijiyay in xiddiga shanta jeer ku guuleystay abaalmarinta Ballon d’Or uusan “damacsanayn inuu sii joogo” kooxda reer Talyaani.
Waxaa la arkay isaga oo ka baxaya xerada tababarka Juventus subaxnimadii Jimcaha halka kooxda inteeda kale ay bilaabeen tababarkooda, kahor inta uusan Allegri xaqiijin inuu doonayo inuu baxo.
Goal ayaa xaqiijisay khamiistii in City ay wadahadalo ka yeelatay suurtogalnimada saxiixiisa, laakiin ma jirin wax heshiis ah oo labada dhinac ay ka wada gaaree ciyaaryahanka.
Ciyaaryahankii hore ee Man United ayaa la rumeysanaa inuu u furan yahay inuu u dhaqaaqo Etihad Stadium iyadoo wararka qaar habeenimadii Khamiistii ay soo warinayeen in Ronaldo uu heshiis shaqsiyadeed la gaaray City inkastoo uu horay u sheegay inuusan marnaba u safan doonin mid kamid ah kooxaha sida weyn ula xifaaltama Red Devils.